'Sequía' luthotho olutsha lweTV kunye nobuso obaziwayo | IBezzia
'Sequía' luthotho olutsha lweTV kunye nobuso obaziwayo
USusana godoy | 01/06/2021 14:00 | Iindaba
'Imbalela' sele iyinyani kwiTVE. Kule meko, ayizizo iqonga, esihlala sithetha ngazo, ezisibonisa ngeendaba ezinomdla. Kubonakala ngathi amajelo aqhelekileyo ayabheja nakwintsomi kwaye kule meko isuka kubadlali abaziwayo nabaseSpain.
Kwinto ebonakala ngathi iyakwamkelwa kakuhle kwaye ngaphezulu kwako konke, kwingxoxo yayo yokuba ngokuqinisekileyo iya kuba nefuthe elingakaze libekho ngaphambili. Kuyonwabisa, ke imfihlakalo iya kuba kwicala lethu kodwa imixholo emininzi iya kongezwa kuyo yezo sihlala sithanda ukuzifumana. Ufuna ukwazi okungakumbi?
1 Yintoni isiqwenga 'sembalela'
2 Iindawo esiza kubona kolu thotho
3 Ngoobani abalinganiswa kolu ngcelele?
Yintoni isiqwenga 'sembalela'
Siqala ngokwazi ukuba siza kufumana ntoni kolu thotho lutsha lweTV ngokusebenzisana nomabonakude wasePortugal. Ewe, njengoko siqhubele phambili, yinto evuyisayo leyo iqala ngemfihlelo enkulu engasonjululwanga edolophini. Le ndawo iyibonile indlela imbalela eyenze ngayo. Kodwa ngenxa yakhe zizidumbu ezibini ezinamanxeba okudutyulwa ekudala ekho. Ukusukela ngoko ukuya phambili, ngamapolisa ajongene nokuzama ukusombulula olu lwaphulo-mthetho.
Xa kwaziwa ukuba ngubani amaxhoba, ziintsapho ezimbini ezinqumlayo nangona zingahlali ndawo enye. Kodwa oku kuya kuphakamisa iimfihlo ezininzi kunye namaqhina afihliweyo ukuba avele. Kodwa kunjalo Siza kufumana ukungcatshwa, uthando kunye namabhongo amaninzi. Ukuthetha ngokubanzi, sele sinesishwankathelo sayo yonke into eya kwenza ukuba 'Imbalela' ibe lunye kuthotho olutsha oza kubambeka kulo, ngokuqinisekileyo. Okwangoku, ukufota iyaqala, ke kufuneka silinde ithutyana.
Iindawo esiza kubona kolu thotho
Ngokuqinisekileyo ezinye zeendawo zokufota ziya kuqhelana nawe, kuba kusitsho njalo ukurekhodwa kuya kuqala kwiindawo zaseCáceres, naseMadrid. Kodwa njengoko besitshilo ngaphambili ukuba yayiyimveliso yokusebenzisana kunye nomabonakude wasePortugal, kufuneka kuthiwe iindawo zaseLisbon okanye eCascais ziya kuba njengezona ziphambili, njengoko kubonisiwe yiVerTele! Ke, ukwazi nje ezi datha, siyaqonda ukuba ithembisa okuninzi, kuba iindawo nazo zinomtsalane omkhulu kwaye ezongezwe kwimpikiswano zinokuthi sele zininzi malunga nazo.
Ngoobani abalinganiswa kolu ngcelele?
Kwelinye icala sifumana URodolfo Sancho, esimaziyo sonke ngokuqala kuthotho olunje ngo'Al leaving class 'nokukhula kwabanye abanjengo' Amar ngamaxesha oxinzelelo ',' Isabel 'okanye' Ubulungiseleli bexesha ', phakathi kwabanye abaninzi. Ecaleni kwakhe ngumdlali weqonga U-Elena Rivera simbonile kwi 'Servir y Protecte', 'La Truth' okanye 'Inés del alma mía'. UMyamyam Gallego lelinye lamagama avelayo phakathi kwabalinganiswa abaphambili boluhlu lweTVE. Zombini 'Iintatheli' kunye 'noKhozi Olubomvu' okanye 'iimfihlo zikaRhulumente' nazo zazinayo.
Ke njengoko sibona eyona midlalo iphambili izele ziinkwenkwezi ezinkulu, ngaphandle kokulibala UMiguel Angel Munoz ukuba simkhumbula ukusuka 'kwiNyathelo lokuya phambili' okanye 'iUlysses Syndrome', phakathi kwabanye. Ecaleni kwakhe siza kubona noJuan Gea, onomsebenzi omde kumabonwakude nakwilizwe leemovie nakwilizwe lezemidlalo elinemisebenzi emininzi. Umlingisi wasePortugal UMargarita Marinho kunye nomlingisi uGuilherme Filipe bayazibandakanya nesamente. Njengoko ukufota kwayo kuqala ngoku ekuqaleni kwehlobo, ngalo mzuzu akusekho datha kuthotho. Kodwa siyathemba ukuba kungekudala siza kukonwabela bonke abadlali kunye nabadlali kwiscreen esincinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » 'Sequía' luthotho olutsha lweTV kunye nobuso obaziwayo
Izibonelelo zokujikeleza impilo
Iindlela ezi-4 ezizinzileyo zokuphatha amashwamshwam akho